आफ्नै छिमेकी भएर पनि इन्डिया त कस्तो छुच्चो ! बेलाबेलै हामीलाई चिरिक्क–चिरिक्क चिमोटेर ब्युँझाइरहन्छ । सुत्नै दिँदैन । सुगौली सन्धि गरेर चुपचाप सुतेका हाम्रा पुर्खालाई पटक–पटक चिमोटेर ब्युँझाउँदै आएको इन्डियाले आजसम्म पनि चिमोट्न छाडेको छैन । चिमोटेको ठाउँमा यसो सुमसुम्याएर सुत्न खोज्यो फेरि चिमोटेरै ब्युँझाउँछ ।
कहिले सुस्तामा चिमोट्छ, कहिले महेशपुरमा, कहिले तिलाठीमा, कहिले टनकपुरमा चिमोट्छ । मेचीदेखि कालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म चिमोटेर ब्युँझाइरहन्छ । चिमोट्दा नटेरेको भएरै होला, लिपुलेकमा त नंग्य्राएरै पो ब्युँझायो ।
तैँले त्यसरी ब्युँझाएपछि सरकारलाई कति गाह्रो पर्छ ! ब्युँझेपछि चुप लागेर बस्न मिलेन । तन्याकतुनुक तन्किनुपर्‍यो, मिटिङ बैठक बस्नुपर्‍यो, वक्तव्य/सक्तव्य निकाल्नुपर्‍यो । हेलिकोप्टर उडाउनुपर्‍यो, सीमा निरीक्षण गर्नुपर्‍यो, पुराना नक्सा खोज्नुपर्‍यो, अनुसन्धान गरेजस्तो गर्नुपर्‍यो । राजदूतलाई बोलाएर आपत्ति प्रकट गर्नुपर्‍यो, कूटनीतिक नोट दिनुपर्‍यो ।
प्रतिपक्षी दलकालाई त तैँले हिजो के हेरेको थिइस् भनेर हप्काउँदा चुप लाग्छन्, सत्तापक्षकै नेताका छाडा गाली खानुपर्‍यो । मिटिङमा आच्छुआच्छु पार्छन्, सदनमा र्‍याखर्‍याख पार्छन्, सहनुपर्‍यो ।
प्रतिपक्षलाई पनि त्यस्तै मुस्किल । यस्सो केही भन्न हुन्न, आफू सरकारमा हुँदा के गर्‍याथिस् भनेर उल्टै हप्काउँछन् । आफूले यो गरेको थिएँ भनेर पत्ता लगाउनुपर्‍यो, सदनमा पेस गर्नुपर्‍यो । सडकमा कार्यकर्ता उफार्नुपर्‍यो, धर्ना गराउनुपर्‍यो, प्रहरीलाई जिस्क्याउनुपर्‍यो, गिरफ्तारी दिनुपर्‍यो, गिरफ्तारीको विरोध गर्नुपर्‍यो । काँडेतारका कुरा गर्नुपर्‍यो, सिमानामा बारका कुरा गर्नुपर्‍यो । आफूले सरकारमा हुँदा गर्न नसकेका कुरा किन गरिनस् भनेर सरकारलाई सोध्न कम गाह्रो हुन्छ ?
अरू त अरू हामी कवि, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीदेखि सर्वसाधारणको पनि निद्रा कम खलबलिन्छ, यसरी पटक–पटक ब्युँझनुपर्दा ! कविता फुराउनुपर्‍यो, गीत–गजल लेख्नुपर्‍यो, छाप्नुपर्‍यो, प्रचारप्रसार गर्नुपर्‍यो । दूतावासअगाडि, माइतीघर मण्डलाहरूमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो, क्रान्तिका कुरा गर्नुपर्‍यो, आत्मनिर्भरताका कुरा गर्नुपर्‍यो । अन्तर्वार्तामा, लेख–रचनामा, सामाजिक सञ्जालमा चर्काचर्का विचारहरू दिनुपर्‍यो । यसरी बेलाकुबेला, ठाउँ–कुठाउँ चिमोट्दा हाम्रो राष्ट्रियता कति दुख्छ ! ख्याल गर्नु पर्दैन इन्डिया ?
तँ इन्डिया बुद्धि पनि नभएको क्या ! हामी आनन्दले निदाइराखेका थियौँ, किन बारुद पड्काएर पहरा फुटाएको ? किन टाढाटाढादेखि देखिने गरी आकाशमा धुवाँ पठाएको ? आवाज निकालेर हेलिकोप्टर किन उडाएको ? वनजस्तो हरियो रङको गुडाउनू, पहराजस्तो कालो रङको गुडाउनू, किन पहेँलो रङको नयाँ डोजर गुडाएको ? अनि बडो हल्लाखल्ला गरेर सडक उद्घाटन गर्नुपर्छ ? चुपचाप गाडी गुडाए हुँदैनथ्यो ? हामीलाई हेपेको ? कि तैँले वीर गोर्खाहरूको इतिहास पढेको छैनस् ? कि तैँले वीर बलभद्रको नाम सुनेको छैनस् ? कि तैँले अमरसिंह र भीमसेन थापाहरूको जीवनी पढेको छैनस् ?
हेर् इन्डिया, हाम्रा कुरा सुन् ! सुनिनस् भने हामी थप कडा आपत्ति जनाउँछौँ, राजदूतलाई बालुवाटारै बोलाएर अर्को पनि कूटनीतिक नोट दिन्छौँ । हामी यसैपालि तैँले हडपेको क्षेत्रभन्दा दस/बीस किलोमिटर वर सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गर्दै छौँ । अब हामी त्यता वरपर गस्ती गर्छौं । ढुंगाहरूमा लठ्ठीले हानेर आवाजहरू निकाल्छौँ, सुसेल्छौँ । खोक्छौँ, हाच्छ्युँ गर्छौं अनि मात्रै सुत्छौँ । भनेको मान्, अबचाहिँ सुत्न दे है इन्डिया, सुत्न दे !